ခုတလော ကြားရတာ နားဝမှာမချမ်းသာစရာတွေဗျာ။ အနုပညာဆိုတဲ့မြို့ကြီးတော့ ဘာတွေဖြစ်နေလည်းမသိ။ အဲ...သိသလိုလိုတော့ ရှိပါတယ်။ ထားပါတော့။
မြန်မာရုပ်ရှင်ကားတွေ ကိုယ်ခံအားကျဆင်းမှုရောဂါရနေတယ်။ တစ်နှစ်လုံးကိုမှ ရုပ်ရှင်ကားအရေအတွက်က လက်နှစ်ဖက်စာမပြည့်ဘူးတဲ့။ (မှားရင်ပြောကြပါ။) ကျွန်တော်ထင်တယ်။ အရည်အတွက်ထက် အရည်အချင်းကိုဦးစားပေးတဲ့သဘောဖြစ်မှာပါ။ နော်။ အကယ်ဒမီကို ဘယ်လိုပေးကြမလဲမသိဘူး။ ကားနည်းတော့ ဆုံးဖြတ်ရတာသက်သာတာပေါ့ဗျာ။ ခုလက်ရှိတော့ မြန်မာရုပ်ရှင်ကားပြစရာမရှိလို့ ရုပ်ရှင်ရုံတွေမှာ နိုင်ငံခြားကလာတဲ့ဟာတွေပဲပြစားနေကြတယ်။ English စာတိုးတက်အောင်လို့ထင်တယ်။
ဂီတလောကလည်းထိုနည်းလည်းကောင်းပေါ့။ သင်္ကြန်ဆိုတာက နီးလာပြီ။ သင်္ကြန်သီချင်းခွေတွေလည်းထွက်လာပြီ။ အရေအတွက်ကတော့ မနှစ်ကထက် တစ်ဝက်လောက်ပဲထွက်နိုင်မယ်တဲ့ဗျာ။ မနှစ်က အခွေ၂၀ လောက်ထွက်ခဲ့တယ်။ ဒီတော့ ၁၀ ခွေလောက်ပဲထွက်မယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲ။ ဒါလည်း အရည်အချင်းကို ဦးစားပေးတာထင်တယ်။ များများမထွက်တော့ လူတွေပိုက်ဆံသိပ်မကုန်ကြတော့ဘူးပေါ့။
ရေးသားသူ Wai Yan ရေးသားသောအချိန် 9:57 PM
မြန်မာတွေမှာ ခက်တာက မရှိလို့ မလှု မလှုလို့မရှိ ဖြစ်နေတာ။ ဇတ်ကားကို Quality ဖြစ်အောင် မရိုက်နိုင်ကြဘူး။ ဒီတော့ ကြည့်မဲ့လူက မရှိဘူး။ ပြီးတော့ ဇတ်ဝင်ခန်း နောက်ခံတီးလုံးတွေကလည်း ကျွန်တော် လူမှန်းသိတတ်ခါ စကတည်းက တီးလုံးတွေ။ ဟာသကားဆိုလည်း ဟာသမမြောက်ပဲ သောက်ပေါ ကားဖြစ်နေတယ်။ ဒရမ်မာ ဆိုရင်လည်း ဇတ်လမ်းထက်ထက် ဇတ်ကောင်ကို ဦးစားပေးနေတယ်။ ဒီတိုင်းသွားနေသမျှ နောက်ကျကျန်နေ ဦးမှာပါ
Last time, we used to say that Myanmar films are bad quality. But the quanity is not. Today, both quality and quanity are going down.
-they dun have enough money to create quality films.
-they cant buy some latest equipments like camera.
-they have lack of creavities.
-they have many limitations.
Yeah. u r right. Myanmar comedy films r not funny and not enough to make people laugh. Since i was in Myanmar, i seldom watch Myanmar films and videos 'coz of that.